Wararka Somaliska iyo idaacada Sweden kala soco app-keena | Somaliska
Dhawaan waxaan soo saartay Barnaamij Mobile oo aan ugu tala-galnay in aan akhristayaasheena u fududeyno la socodka dhacdooyinka ugu dambeeyay. Barnaamijkaan ayaa kuu sahlaya in uusan ku dhaafin mowduuc walba oo aan qorno iyo xitaa waxaad ka ka akhrisan kartaa oo aad ka dhagaysan kartaa wararka idaacada Sweden qeybta afka Soomaaliga (Sveriges Radio).
Dhawaan waxaan ku soo dari doonaa qeyb chat ah oo aad kula xiriiri karto akhristayaasha bogga meelkasta oo ay Sweden iyo caalamka ka joogaan.
Hadaba sidee ayaad u soo degsan kartaa App-ka Somaliska. Waxaad u baahantahay in aad leedahay mobile nuuca Android ah sida Samsung, HTC, LG iyo kuwa la midka ah. Waxaad riixdaa Linkiga hoose oo ka dibna soo degso.
Riix si aad u soo degsato Somaliska Android App
Walal basaborka yar in lamamnucay bixidisa afrika ma xaqiiqbaa